Nagu saabsan - Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd.
Daaweynta Degdegga ah
Qalabka Mashiinka CNC
Qaybaha Qalabka Caafimaadka
Qaybaha Tamarta Cusub
3D Qaybaha Birta Daabacaadda
Nolol midab leh
Mid ka mid ah soosaarayaasha ugu dhakhsaha badan noocyada degdegga ah ee Shiinaha Qiimaha ugu Fiican OEM Adeegga Habka Degdegga ah ee loogu talagalay R&D.
YuxinWright waxay u heellan tahay R&D iyo soosaarida noocyada warshadaha, waxayna si qayaxan u adeegsanaysaa tignoolajiyada wax soo saarka horumarsan iyo hal-abuurnimada macaamiisha warshadaha. Shirkaddayadu waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya soosaarayaasha noocyada warshadaha ee Shiinaha waxayna ku leedahay tartan xoog leh suuqyada dibadda.Waxaan ku urursannay khibrado hodan ah oo ku saabsan cilmiga cilmi-baarista tikniyoolajiyadda farsamaynta sare ee sare ee qalabka injineernimada warshadaha cusub. Waxaan bixinaa xalalka adeegga ugufiican ee loogu talagalay macaamiisheena dhamaadka sare oo ay kujiraan adeegyada noocyada iyo tiro yar oo wax soo saar dhaqso ah. , Qalabka korontada, Qalabka tamarta cusub, warshadaha iswada iwm.
Kun shan Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd. ayaa bixinaysa adeegga kartooshirkadaha warshadaha gudaha iyo adduunka oo dhan. Shirkadaha ku jira naqshadeynta sare iyo dhamaadka wax soosaarka habeysan ayaa lehbaahida noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah iyo qaybo yaryar oo yar yar oo leh multi_spec. Marka loo eego habka naqshadeynta iyo ujeedada, ama amarka la habeeyay, dalabka noocan ah waxaa la socda astaamaha “multi_spec, tiro yar, tayo sare leh iyo waqtiga hogaaminta oo gaaban", Oo aan ku qeexno"Sare-u-qaad dalab macquul ah”. Amaradaas oo kale, way adag tahay in si dhakhso leh loogu hagaajiyo khadadka wax soo saarka shirkadaha wax soo saarka badan, sidoo kale way adag tahay in la buuxiyo shuruudaha tayada looga baahan yahay warshadleyda dhaqameed.
Tan iyo markii ay shirkaddu aasaastay, waxaan xoogga saareynaa naqshadeynta iyo soo-saarista noocyada warshadaha oo aan ku dabaqeyno tikniyoolajiyadaha wax soo saarka casriga ah iyo hal-abuurnimada dalabyada costomers. Kunshan Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd. waa tan ugu sareysa Warshadahasoosaaraha noocoodaoo leh tartan caalami ah oo adag. Waxaan ku soo ururinay khibrad badantikniyoolajiyad sare oo leh agab cilmi-baaris oo cusub oo gaar ah oo warshadaha injineernimada ah, oo si isdaba joog ah u bixinaya xalka adeegga ugu habboon noocyada iyo soosaarka degdegga ah ee baahida dufcado yaryar oo kala duwan ilaa qiimaha-sare ee alaabada 3C, qalabka gawaarida, qalabka siyaada ah / qalabka gaarka ah, qalabka caafimaadka, qalabka korontada, qalabka tamarta cusub iyo warshadaha otomaatiga.
Ilaa iyo bilowgii shirkadda, waxaan markhaati ka nahay oo ka qaybqaadannay horumarinta warshadaha wax soo saarka degdegga ah. Waxaan u heellan nahay inaan si isdaba joog ah u dhisno saldhigga ugu weyn uguna horumarsan ee wax soo saarka dalka Shiinaha, innagoo taageereyna "baahi sare oo sarreysa" ee gudaha iyo adduunka oo dhan waqtigeeda iyo si dhakhso lehbaiyadoo 24-ka saac ee wax soo saarka aan kala go 'lahayn sanadka oo dhan.
Cinwaanka:No.20, Wadada Zhipu, Magaalada Qiandeng, Magaalada Kunshan, Shiinaha